८ फागुन - चितवनको पदमपुर गाउँका १,७०० परिवारका झन्डै १५ हजार मानिसलाई नेपाल सरकारले बसाईँ सारेको थियो। बसाईँ सार्दा थोरै जग्गा हुनेलाई जग्गाको सट्टा जग्गा दिइएको थियो। अहिले अरुण र बूढीगण्डकीमा जस्तो पैसा दिएर 'जहाँ जान्छौ जाओ' भनिएको थिएन। कति पनि जमिन नहुनेलाई तीन कट्ठा दिइएको थियो। यसले गर्दा पुरानो...
लभमा लभ मात्रै छैन, चिराचिरा समाज छ
३ फागुन - भ्यालेन्टाइन्स डेले काठमाडौं र दिल्लीजस्ता सहरलाई निकै बलियो गरी समातेको छ। यस्तो आकर्षण म अमेरिकामा देख्दिनँ। युवाहरू २२ वर्ष पुगेपछि भ्यालेन्टाइनको कुरा गरेर बस्दैनन्। कलेजमा पढिन्जेल मात्रै यस्ता चर्चा हुन्छन्, कलेजबाट आउट भएपछि भ्यालेन्टाइनको नाम लिएर कोही बस्दैन। यता हामीलाई भने यसैले...
२६ माघ - अरु केही देशका उदाहरण हेर्‍यो भने मूलतः आफ्नै देशमा बसेर छोराछोरीको हेरविचार गर्नुलाई ठूलो योगदान मानिन्छ। त्यसो गरेन भने तिनीहरूको भविष्य अन्धकार हुन सक्छ। कसलाई रहर हुँदैन– आफू पनि विदेश जाऊँ, केही सिकौँ र फर्केर आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने। दुवैजना श्रीमान्श्रीमती विदेशमा रह्यो भने उनीहरूको...
बैंकहरू रातारात नाफा कमाउने खेलमा लागे
२५ माघ - नेपालको वित्त क्षेत्रमा अनेक किमिसका तरङ्गहरू आउने गर्छन्। केही समयअघि तरलता अधिक भयो भनियो। कालान्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न मात्रै हैन, निक्षेप राखेका मानिसलाई पैसा लिन आउँदा समेत अहिले नआउनुस् भन्न थालिएको सुनिएको छ। यो भनेको सामान्यतया ‘बैंकिङ फेलियर’को लक्षण हो। यसले बैंकले...
२३ माघ - नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने सैद्धान्तिक निष्कर्ष स्थापित हुँदै गएपछि समाजको समृद्धि तथा आर्थिक विकासको चर्चा ह्वात्तै बढेको छ र अहिले ‘समृद्धि’ सबैभन्दा लोकप्रिय विषयहरूमध्ये एउटा बनेको छ। समाजमा आफ्नौ हैसियत देखाउन चाहाने सबैले समृद्धिका विषयमा चर्चा गर्ने होडवाजी चलाइरहेका छन्।...
२२ माघ - ओली राष्ट्रवाद विदेशी थिचोमिचोको विरुद्ध थियो। चीनसँग सम्बन्ध विकास गरी भारतीय परनिर्भरता घटाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य केन्द्रित थियो उनको राष्ट्रवाद। यो राष्ट्रवादसँग म पनि नतमस्तक थिएँ। तर त्यो राष्ट्रवाद अहिले मधेसविरुद्ध केन्द्रित भएजस्तो हुँदा मधेसी राष्ट्रवाद सबल हुन थाल्नु चिन्ताको विषय हो।
१२ माघ - सबैभन्दा पहिले नेपाल–भारत सीमामा रहेका नाकाहरूबाट भारत जाने र आउनेको तथ्यांकलाई अध्यावधिक गर्ने भारतका प्रमुखजसो सहरहरूमा गई अनुसन्धानमूलक कार्यहरू गराउने र यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखी सुरुमा पाइलटको रूपमा योजना सुरु गर्यो भने मात्र आशा गरेअनुसार केही सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो अन्यन्त जटिल र...
स्थानीय निकायप्रति नागरिक आक्रोशको कारण
११ माघ - स्थानीय निकायको रुपमा महानगर, उपमहानगर, नगर, जिविस र गाविसलाई चिनिन्छ। यी निकायहरु संचालनका लागि सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ जस्ता विस्तृत कानुनी प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ। यी ऐन र नियमावली स्थानीय निकायहरुको लागि मूल ग्रन्थ हुन्। तर यसको...
आर्थिक समृद्धिको घाम ताप्नै नपाई मर्ने?
९ माघ - साझा चाहना, साझा गन्तव्य र साझा जिम्मेवारी बोकेर साझा समृद्धितिर हिँड्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्ने कुरा सजिलो छैन। यो यात्रा पूरा गर्न एसियाका ठूला देशहरु चीन र भारत दुवैले यस योजनाको साझा जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ।
२ माघ - नेपाली राष्ट्रवादीहरुको रवैया पनि भारतीय अतिहिन्दुवादी भन्दा कम छैन। हालैको पृथ्वीजयन्ती र कथित टोपी दिवसमा अभिव्यक्त विचारहरुबाट स्पष्ट हुन्छ। कथित टोपी दिवसका दिन नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अरु समुदायको पनि सम्मान हुनुपर्छ भनी ट्वीट गर्दा उनीविरुद्ध चर्को रुपमा प्रहार भयो।...
२७ पुस - साँच्चिकै ५० लाख नेपाली जनता भोट दिन योग्य छन् र नपाइरहेका हुन् भने त्यो संख्या गत संविधान सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पाएको सम्पूर्ण मतमा थोरै मात्र कम हो। यसको अर्थ यदि कुनै राजनीतिक पार्टीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मात्र संगठीत गरेर भोट दिन पाउने अधिकार स्थापित गर्न सक्ने...
२५ पुस - हामीले घुमेको तिब्बतका स्थानहरु यश, क्षमता र आत्मविश्वास प्रदर्शन गरिरहेका थिए। खासगरी नयाँ संस्कृति निर्माण, ऐतिहासिक ज्ञान व्यवस्थापन, सहरीकरण योजना र पर्यटन विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा, जल तथा उर्जा उद्योग र प्राविधिक– औद्योगिक–कृषि आविष्कारजस्ता क्षेत्रहरुमा।
२४ पुस - छोटो अवधिमै नेपालखबर नेपालीबीच लोकप्रिय अनलाइन पत्रिकाको रुपमा स्थापित भएको छ। आफ्नो घेरा फराकिलो बनाउँदै जाने क्रममा थप संस्करण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप हामीले आजैदेखि नेपालखबरको हङकङ संस्करण सुरु गरेका छौँ।
२२ पुस - परिवर्तन कहिल्यै सहज र चाँडो हुँदैन। हामी सबै चुनौतीहरुको हल एक कार्यकाल वा एक राष्ट्रपतित्व वा भनौँ एक जीवनमा गर्न सक्दैनौँ। र हामीले हासिल गरेका यी कुराबाहेक अझै धेरै काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
१८ पुस - मानवताको विकासमा हामी सबैभन्दा खतरनाक क्षणमा छौँ भन्ने कुराको स्मारक हुन् यी सबै कुरा। अहिले हामी बाँचिरहेको ग्रहलाई नै ध्वस्त बनाउने प्रविधि हामीसँग छ तर त्यसबाट बच्ने क्षमताको विकास हामीले अहिलेसम्म गरिसकेका छैनौँ। सायद केही सय वर्षमा ताराहरुमा हामीले मानव उपनिवेश निर्माण गर्नेछौँ तर हामीसँग...
१८ पुस - २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प गएको बेला उचित साधन स्रोत र कुशल जनशक्तिको अभावमा नेपालले भोगेको तीतो अनुभव विश्वसामु छर्लङ्ग छ। यस्तो बेलामा नेपाल र चीनको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन सकेमा आतंकवाद नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापनमा दुई सेनाबीच ज्ञान आदानप्रदान हुनेछ। जुन भविष्यका लागि दुवै देशलाई उपयोगी हुन्छ।
चीन–नेपाल सहकार्यमा भारत अझै उदार हुनुपर्छ
१२ पुस - चीन–नेपाल सहकार्यले एकताको प्रवृत्ति र द्विपक्षीय स्वार्थको कुरालाई पुष्टि गर्छ। भारतका केही मानिस यो सैन्य अभ्यासलाई लिएर निकै संवेदनशील छन् तर द्विपक्षीय सहकार्यले भविष्यमा सुरक्षाको मामिलामा हुने साझेदारीको ढोका खोल्न सक्छ।
११ पुस - काठमाडौंका बाटाहरू सकेसम्म कार र मोटरसाइकललाई सजिलो हुनेगरि बनाइएका छन्। सार्वजनिक बसका लागि अलग लेन, साइकल ट्रेल र पैदलयात्री काठमाडौँका बाटाको प्राथमिकतामा पर्दैनन्। यसका कारण पनि मानिसका लागि निजी साधन सहज हुन्छन्।
१० पुस - सामूहिक सहकार्यमा आपसी बुझाई, सहयोगीपन र क्षमता सबल हुँदा मात्र त्यो सहकार्य प्रभावकारी हुन्छ भन्ने समाजशास्त्रीय व्याख्या छ। मीरा राई, पासाङ ल्होमु, तेरिया मगर र प्रशान्त तामाङको पक्षमा उभिन सामूहिक सहकार्य गर्दा आपसी बुझाई, सहयोगीपन र क्षमता पक्ष सबल भएकै कारण त्यो सहकार्य सफल भएको हो। उदाहरणको...
२ पुस - सबै मन्त्रालयसँग समन्वय–सहकार्य गर्ने, तिनै मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति र अन्य साधन उपयोग गर्ने नपुग साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने र नयाँ किसिमको नीति, नियम, प्रणाली र मापदण्ड बनाएर काम गर्ने उद्देश्यले पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएको हो। मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले बहुआयामिक (होलिस्टिक) अवधारणमा...